नौ बर्षको गायक मनिष किन यसरी एकाएक मिडियामा चर्चा ? भिडियो सहित - Jerung Films
नौ बर्षको गायक मनिष किन यसरी एकाएक मिडियामा चर्चा ? भिडियो सहित
जेरुङ फिल्मस संवाददाता,१६,भदौ—काठमाण्डौं । पछिल्लो समय वालक गायक मनिष लिम्बुको मिडियामा एकाएक चर्चा चुलिएको छ । समान्य परिवारमा पूर्वीय नेपालको पाँचथर जिल्लामा जन्मेका लिम्बु सानै उमेरमा सेलीबे्रटी बनी सकेका छन् ।
करिब एक महिना अगाडी गायक तथा संगीतकार सुहाङ लिम्बुको साथमा गीत रेकर्ड गर्न काठमाण्डौं आएका मनिष यतिखेर मिडियामा ब्याईनब्याइ छन् । उनी दिनहु १० देखि १५ वटा मिडियाहरुमा अन्तवार्ता दिन ब्यस्त छन् ।
गीत संगीत कही कतैपनि नसिकेका वाल गायकको आवाज सुन्दा आम दर्शक पनि अचम्बित भएका छन् । भगवाको बरदान नै साबित भएको सबैको आँकल छ । मिडियामा अन्तावार्ता दिदा पनि उल्टै मिडियाकर्मीलाई नै अचम्बित पार्ने क्षमता उनमा रहेको छ ।
उनी मज्जाले ठूलै उमेरका मान्छेहरु जस्तै गरि जोक्स पनि गर्छन् । मनिषको गला, कला र प्रतिभा देखेर सबै अचम्म मान्छन् । मेलीना राई र आफनो बिहे गर्ने प्रशङ्ग उठाउँदै आम दर्शक तथा मिडिया कर्मीहरुलाई हशाउने गर्छन् ।